घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई अड्डा » यात्री संख्यामा रिकभरी FrapORT मा जारी रहन्छ
हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • विभिन्न समाचार
एफ्रापोर्ट एयरपोर्टमा कार्गो ट्राफिकले अझ कडा वृद्धि देख्दछ, युरोपको अग्रणी एयरफ्रेट हबको रूपमा एफआरएको स्थितिलाई रेखांकित गर्दछ। फ्रेपोर्ट समूह एयरपोर्टले विश्वव्यापी रूपमा ट्राफिक लाभ पनि दर्ता गर्दछ।
यो जून २०२१ देखि फ्रेप्ट ट्राफिक तथ्या .्कले यात्री संख्यामा स्पष्ट रिकभरी देखाउँदछ.
जुन २०२१ मा, कोविड १ p महामारीको निरन्तर र व्यापक प्रभावको बाबजुद, यात्री ट्राफिकले सुधार गर्न जारी राख्यो।
फ्र्यांकफर्ट एयरपोर्ट (FRA) रिपोर्टिंग मा मा लगभग १.1.78 मिलियन यात्रुहरु लाई सेवा पुर्‍यायो।
FDPORT मा ट्राफिक संख्या जून २०२० को तुलनामा करीव २०० प्रतिशतको वृद्धि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जे होस्, यो आंकडा जून २०२० मा रेकर्ड गरिएको कम बेन्चमार्क मानमा आधारित छ, जब कोविड १ infection संक्रमण दरहरू बढ्दै गर्दा ट्राफिक कम भएको थियो। रिपोर्टिंग महिनामा, कोविड - १ inc घटना दरहरुमा गिरावट र यात्रा प्रतिबन्धको थप उठानले ट्राफिक मागलाई सकारात्मक असर गर्यो। महामारीको प्रकोप पछि पहिलो पटक, फ्रान्कफर्ट एयरपोर्टले फेरि एकै दिनमा ,2020०,००० भन्दा बढी यात्रुलाई स्वागत गरे जुन २०२१ मा दुई छुट्टै दिनमा रेकर्ड गरियो।
पूर्व महामारी जून २०१ 2019 सँग तुलना गर्दा, एफआरएले रिपोर्टिंग महिनामा अर्को उल्लेखनीय यात्रु passenger 73.0.० प्रतिशत गिरावट दर्ता गर्‍यो।1 २०२१ को पहिलो आधा समयमा, एफआरएले लगभग .2021 लाख यात्रुहरूको सेवा गर्यो। २०२० र २०१ 6.5 मा समान छ महिनाको अवधिको तुलनामा, यसले क्रमशः .2020 2019.। प्रतिशत र .46.6०..80.7 प्रतिशत घटेको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यसको विपरित, एफआरए मा कार्गो यातायात मा वृद्धि को गति सामान्यतया यात्री विमानहरु द्वारा प्रदान पेट क्षमता को निरन्तर कमी को बावजुद जारी छ। जुन २०२१ मा कार्गो थ्रुपुट (एयरफ्रेट र एयरमेल समावेश) वार्षिक मा .०..2021 प्रतिशतले वृद्धि भई १ jump ०, १30.6१ मेट्रिक टन पुगेको छ जुन जून महिनामा एफआरएमा रेकर्ड गरिएको दोस्रो उच्चतम मात्रा हो। जुन २०१ 190,131 को तुलनामा कार्गो ०.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यो मजबुत बृद्धिले फ्रान्कफर्ट एयरपोर्टको स्थितिलाई युरोपको अग्रणी एयरफ्रेट हबको रूपमा रेखांकित गर्दछ। एयरक्राफ्ट आन्दोलनहरू केवल ११2019 प्रतिशतले मात्र बढेको वार्षिक आधारमा २०,०१० टेक अफ र ल्यान्डि .मा पुगे। सन् २००० २१ मा सञ्चय गरिएको अधिकतम टेकऑफ तौल (MTOWs) 9.0 114..20,010 प्रतिशतले वृद्धि भई १.78.9 million मिलियन मेट्रिक टन भयो।
संसारभरिका फ्रेपोर्ट ग्रुपका एयरपोर्टहरूले पनि २० 2021२ मा जूनमा ट्राफिक बृद्धि देखिएको छ। केही विमानस्थलहरूमा यातायात धेरै सय प्रतिशतले बढेको छ - जुन २०२० मा जुन तीव्र यातायातको स्तरमा घटेको छ। यद्यपि फ्रेपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टफोलियोमा सबै विमानस्थलहरूमा यात्री संख्या। अझै २०१ June को जून २०१ of को पूर्व-महामारी स्तर भन्दा तल नै थियो।
स्लोभेनियाको जुजुल्जाना एयरपोर्ट (LJU) ले रिपोर्टिंग महिनामा २,,। 27,953 passengers यात्रुलाई स्वागत गरेको छ। फोर्टालिजा (FOR) र पोर्टो एलेग्री (POA) को ब्राजिलियन एयरपोर्टहरूमा, कुल ट्राफिक 608,088०,,०806,617। यात्रुहरूमा चढे। पेरूको राजधानीमा, लिमा एयरपोर्ट (LIM) ले २०२१ मा 2021०XNUMX१। यात्रुलाई स्वागत गरे।
१ 14 ग्रीक क्षेत्रीय एयरपोर्टहरूले २०२१ को जुनमा करिब १ 1.5 लाख यात्रुहरूको सेवा गरे। बुल्गेरियन कालो समुद्री तटमा बुर्गस (BOJ) र वर्ण (VAR) को जुम्ल्याहा स्टार एयरपोर्टहरूको लागि कुल यातायात १ 2021 यात्रुमा पुगेको छ। टर्की रिभिएरामा, अन्टाल्या एयरपोर्ट (AYT) ले ट्राफिक १ 158,306. लाख यात्रु बढेको देख्यो। रूसको सेन्ट पीटर्सबर्गको पुल्कोवो एयरपोर्ट (एलईडी) मा यात्रुको मात्रा बढेर १.1.7 मिलियन पुगेको छ। चीनमा, शीआन एयरपोर्ट (XIY) ले 1.9..31.8 मिलियन यात्रुलाई वार्षिक आधारमा .3.5१..XNUMX प्रतिशत ट्राफिक फाइदा उठायो।
सारांशमा, दुबै एवाईटी र ग्रीक एयरपोर्टहरूले २० 2021१ मा जूनमा हाम्रो एफआरए होम-बेस एयरपोर्ट जत्तिकै यात्रुहरू प्राप्त गरे, जब कि दुई पटक यात्रु XIY बाट यात्रा गरे। यसले फ्रेपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पोर्टफोलियोको गतिशील प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ।